Kitra: any Kameronina ny filohan’ny Caf | NewsMada
Kitra: any Kameronina ny filohan’ny Caf
Mitsisika ny any Kameronina, nanomboka ny alatsinainy 13 janoary lasa teo, ny filohan’ny Caf, i Ahmad. Mijery, raha voahaja ny fe-potoana, amin’ny asa fanamboarana sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa handraisana ny “Can”, hatao amin’ny taona ho avy, 2021, sy ny “Chan 2020”, hotanterahina afaka telo volana ny tenany.
Hisy koa ny fihaonany amin’ny minisitry ny Fanatanjahantena any an-toerana. Hofaritana amin’izany koa ny daty sy ny volana hanatontosana io fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, amin’ny taona ho avy izao, io.
Hojerena amin’izany na hatao volana janoary sy febroary, toy ny tany aloha, ny hanatontosana ny lalao na hijanona volana jona sy jolay, toy ny natao tany Egypta farany teo. Tsy maintsy hodinihina ny mahamety ny firenena rehetra, ka tsy hanelingelina amin’ny finoana sy ny toetr’andro.